मार्तडी बजार : एक खेप याद- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
मार्तडी बजार : एक खेप याद
जेष्ठ १८, २०७६ सरिता तिवारी
सूदुर पश्चिममा झन्डै पाइलै नराखेको मजस्तो मान्छेका लागि बाजुरा मानौं अगम्य थियो  । त्यो बहुतै अनकण्टार र साँच्चिकै सुदूर थियो  ।
तर सुविचारित सफर तय गरेपछि थाहा पाइहालियो, मजस्ता पात्रको भूगोल ज्ञान कति निम्छरो हुन्छ ! सूचना र सञ्चारको वैश्वीकरणको यो जुगमा हामी न्युयोर्क र एमस्टर्डम या मकाउ र गोवाबारे सजिलै बताउन सक्छौं तर आफ्नै देशका ठाउँहरूबारे अनभिज्ञ छौँ । मधेसमा खाइखेलेर हुर्के पनि मेरो जीउ पहाडसित अपरिचत छैन । यसलाई पहाडको अप्ठ्यारो नक्सा र स्वभाव दुवै थाहा छ । तर जति थाहा छ, गण्डकी धौलागिरी र नारायणी क्षेत्रको परिधिभित्रै थाहा छ ।
बाजुरा देख्न उत्साहित थिएँ म । त्यहाँको भूगोल चिन्न । त्यहाँका मानिसहरू भेट्न । तिनका कुरा सुन्न । मध्यवैशाखको राफिलो मधेसबाट निस्केर उँभो लागेको । मार्तडीसम्म पुर्‍याउने सुविधाजनक कालोपत्रे सडक र पहाडको मौसम दुवैले कुनै स्वप्नप्रदेशमा हिँडेजस्तो आह्लादकारी आनन्द दिए । मज्जा आयो । त्यहाँ पुगेपछि थाहा लाग्यो, अछामको साँफेदेखि बाजुराको सदरमुकाम मार्तडीसम्म पुग्ने सडकको सपना साकार हुनै बाइस वर्ष लागेको रहेछ । जम्मा ५७ किलोमिटर सडकले लिएको धैर्यको परीक्षा कति लामो ? ओहो ! बाजुरामै बस्ने साथी खडक बोहरा यसअघि फेसबुकभित्रका भर्चुअल मित्र मात्रै थिए । उनीसँग एकसरो वार्ता गरेपछि नै हो मैले बाजुरा हान्निने सुर कसेको । मार्तडीसम्म पुगिने बाटोबारे जानकारी लिएपछि म एक्लै भए पनि जाने मनस्थितिमा थिएँ । केही दिन बस्ने सुरमा थिएँ । तै फेरि साथीहरू विनोद लोहनी, ज्वालामुखी र दीपा धितालको हार्दिक साथ पाएपछि यात्राको योजना लम्बिने भयो । तर मार्तडी वरिपरिका गाउँहरू घुम्ने योजना भने थाती नै राख्नुपर्ने भयो । साथीहरू पनि मिसिने निश्चित भएपछि हाम्रो खास मुकाम बनेको थियो खप्तड क्षेत्र । तर सहमति बन्यो, मार्तडीमा कम्तीमा दुई रात बस्ने ।
अघिल्लो दिन बिहान ११ बजे काठमाडौंदेखि छुटेको गाडी भोलिपल्ट झन्डै ३३ घण्टा लगाएर मार्तडी बजार पुगेको थियो । तीव्र गति, कोचाकोच सवारी र उछिनपाछिनको भयङ्कर रोगले ग्रस्त सडकमा यात्रा गर्नु वास्तवमै मृत्युसँग लुकामारी खेल्नुजस्तै हुन्छ नेपालमा । तर हामीले यति लामो सफर कुनै भय र आतंकबिना सुबिस्तासँग पूरा गरेका थियौं । ओर्लिसकेपछि गाडी चालकहरूको भद्र हँकाइको प्रशंसा नगरी छुट्न मन लागेन । प्रशंसा र कृतज्ञता प्रकट गर्ने विनोदजीको विशेष शैली छ । उनका शब्दले गुरुजीहरूका ओठमा फक्रिएको शान्त हाँसो सम्झनलायक थियो । त्यो अगम्य ठानेको भूमिमा पहिलोपल्ट पाइलो राख्दा अँध्यारोको साम्राज्य बाक्लिँदो थियो । ओर्लिनासाथ जीउसित ठोक्किएको शीतल सिरेटोमा अपी र साइपलदेखि छुटिआएको हावाको मादक लय भित्रैसम्म महसुस गरें मैले । चिसो चिसो यो बतासको स्वागत बडो काव्यिक लाग्थ्यो । मलाई विभोर मुद्रामा छातीका अन्तिम खोँचहरूसम्म पुग्ने गरी लामो लामो सास खिच्न मन भयो । मनैमन आफैंसँग भनें, ‘हावासित ठोक्किनु त थालनी मात्रै हो केटी ! हेर्दै जा यहाँ के के अनुभूति हुनेछ !’
एकै छिनमा साथी खडक आइपुगे हामीलाई लिन । हँसिलो व्यक्तित्व र सरल स्वभावका यी युवा लेखपढ र बौद्धिक छलफलमा रुचि राख्छन् । बेलाबेला मेसेन्जर मार्फत विचार आदानप्रदान हुँदाहुँदै हामी एकअर्काका भरपर्दा मित्र बनेछौं । खासमा त्यही मित्रताले डोहोरिएर आइपुगेकी हुँ म यहाँसम्म । सडकमा बत्ती थिएन । सडक छोडेर मुख्य बजारतर्फ प्रवेश गर्दा हामीलाई काठमाडौंको कुनै गल्लीमा हिँडेजस्तो अनुभूति भइरहेको थियो । भृकुटीमण्डपको झल्को दिने बजार ! पसलहरू बन्द हुने तर्खरमा थिए । टर्चलाइट बालेर हामी चार जना खडक्जीलाई पछयाउँदै मूल बजार छिचोलेर बस्ने ठाउँतिर लाग्यौं ।
बाजुरा जिल्लाको मुख्य केन्द्र मार्तडी बजार । हुन त कोल्टी पनि उत्तिकै प्रख्यात छ तर जिल्ला सदरमुकाम भएकाले गाउँ र जिल्लाबाहिरका मानिसहरूको चहलपहलले मार्तडी बजारलाई गुलजार बनाएको छ । भिरालो ठाउँमा बसेको यो बजार अलिक गुजुमुज्ज र अव्यवस्थित देखिन्छ । मुख्य बजार क्षेत्रमा प्रायः टिनैटिनका छाप्रा छन् । बजार बस्नुअघिदेखिको पुरानो बस्तीसँग कुम जोडेर बसेको छ किराना, फेन्सी, कस्मेटिक्स, थान कपडा आदिका दोकानहरूले छापिएको बजार । सडक ‘काट्ने’ प्रचलन नआउँदै बनाइएका सिँढीदार बाटा कताकति अझै छन् तर आधुनिक सडक निर्माणको कामले पनि गति लिँदो छ । सदरमुकाम छुने चार चक्के जिप मात्रै होइनन्, सुविधाजनक बसहरू पनि सजिलैसँग चल्ने सडक छ । बजार भित्रभित्र हुँदै जिल्लाका अन्य ठाउँसम्म सामान ढुवानीका आदिम साधन खच्चड बरोबर देखिन्छन् । घाँडीमा बाँधिएका घण्टी टाङ्टाङ् टुङटुङ् गर्दै हिँड्ने खच्चडहरू ती साँघुरा बाटा हुँदै हिँड्दा पहाडी बजारको भिन्दै अनुभूति र स्वाद मात्रै उपस्थित हुन्न पहाडका पृथक् दुःखको चित्र पनि सँगसँगै हाजिर हुन्छ ।
एउटा बजारलाई आधुनिक भनाउन जे–जे चीजको जरुरत पर्छ, ती सबै चीज उपलब्ध छन् मार्तडीमा । फेन्सीदेखि मदिरासम्म । काठमाडौं र देशका अन्य भूभागसँग जोड्ने सडकदेखि कंक्रिटका अत्याधुनिक संरचनासम्म । स्थानीयस्तरकै रेडियो र इन्टरनेटको सहज पहुँचसम्म । यिनलाई विकासको सूचक मान्ने हो भने मार्तडी विकासशील सहर बन्न लालायित पहाडी बजार हो भन्दा फरक पर्दैन । तर विकास के केलाई मान्ने ? मुख्य कुरा यो हो । स्मरणीय के हो भने बाजुरा जिल्ला अहिले पनि मानव विकास सूचचांकको सबैभन्दा पछिल्लो लहरबाट गनिन्छ । विकासका आधारभूत सर्तहरू व्यवस्थित सडक सञ्जाल, खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षालगायतको पहुँच स्थापित गर्ने कामको गति अझै पनि धेरै कमजोर छ ।
यहाँबाट कोल्टी र जिल्लाका अन्य गाउँहरूसम्म पुग्ने सडक प्रायः सबै कच्ची छन् । कोल्टीको नाम विशेष रूपले किन आउँछ भने जिल्लाको हवाई अड्डा त्यहीं छ । मार्तडीदेखि कोल्टी पुग्नै पाँच घण्टा लाग्छ जिपमा । जिल्लाको हिमाली गाउँपालिकासँगै छिमेकी जिल्ला मुगु र हुम्लासम्मलाई जोड्ने व्यवस्थित सडक अझै प्रतीक्षित छ । भारतका विभिन्न ठाउँमा काम गर्न जाने र धनगढी, महेन्द्रनगर झर्नुपर्ने मानिसहरू बाजुराबाट अछाम हुँदै डँडेल्धुरा छोएर ओर्लिने सडककै बढ्ता उपयोग गर्छन् । त्यसैले पनि मार्तडी बजारमा मानिसहरूको चहलपहल उल्लेख्य छ ।
सूर्योदय ! नयाँ ठाउँमा प्रायः उदाउँदो घामले मलाई जिल्याइदिन्छ । यहाँ पनि यस्तै भएछ ! मैले उत्तर ठानेको दिशा त पूर्व पो रहेछ ! आफ्नो दिशाबोध सम्झेर एक्लै हाँसेँ । अलिबेर घाम उदाइरहेको दिशातिर हेरें । घाममा आङ सेकिरहेका पहाड र पाखाहरूलाई हेरें । पूरै बस्तीलाई हेरेँ । आफू उभिएको घरको कौसी मुन्तिरका ससाना घरहरूलाई हेरेँ । आकाशको एउटा छेउमा तुर्लुङ्ग झुन्डिइरहेको अण्डाकार बल्बजस्तो लाग्छ घामको डल्लो ! सोचेँ, धन्न यो घामले वर्ग, क्षेत्र, जात र लिङ्गको भेद गर्दैन ! सुगम र दुर्गम भनेर अर्घेलो गर्न जान्दैन । काठमाडौंमा लाग्ने घाम, चितवन, पोखरा या वीरगन्जमा लाग्ने घाम र बाजुरामा लाग्ने घाम त आखिर एउटै न हो !
सत्तारूपी घामको शक्ति र तेज आफ्नै वरिपरि खैंचेर यो ठाउँलाई लगातार ओसिलो र अनकण्टार छोडिराख्ने शासकहरू । सकेसम्म जानै नपरोस्, गैहाल्नुपरे टन्न ‘माल’ पर्ने जिल्लामा जाने मेसो मिलोस् भन्ने कर्मचारीतन्त्र । कल्पना गर्छु धनगढी, महेन्द्रनगर र काठमाडौं आवाद गर्न पुगेका यहाँका पहुँचवाला मान्छे कसरी सोच्दा हुन् ! यहीं जन्मिएका, यहाँबाटै स्कुल शिक्षा पूरा गरेका वा विभिन्न कारणले थातथलो छोडेकाहरू के सोच्दा हुन् ?
सबेर सात बजे भेट्ने भनेर बेलुकी छुटेका खडक समयमै टुपुल्किए । अब उनीसँग बजार र आसपास घुम्न निस्कनु छ । निस्कनासाथ पहिलो झमटमै बाजुरेली जीवनशैलीको अभिन्न साधन धान कुट्ने ओखल साक्षात्कार हुन्छ । बाटोनेरै खुला ठाउँमा ‘पब्लिक’ ओखल । धान निफनिरहेकी पाकी महिलाको तन्मय भंग गर्दै सोधिदिन्छौं हामीले, ‘मेसिनमा कुट्न लगे सुख हुँदो हो नि ?’ स्थानीय भाषिकाको लवजमा तिनको सहज र छोटो उत्तर छ , ‘स्वाद हुँदो नाइ ! चामलको जैविक स्वादका लागि हरेक दिनजसो धान कुट्नुपर्ने यो दुःख आफैंले रोजेको त हो । र यसो गर्नेलाई यो काममा खास दुःख नलागेको देख्दा हामीले दुःख ठान्नुपर्ने के नै छ र ? हुँदोरहेछ के भने यसरी धान कुट्ने काम प्रायः महिलाले नै गर्ने रहेछ । ओखलका मुसल छन्, लामा छोटा दुवै आकारका । गह्रुँगा !
यहीं भेटिए असी हाराहारी पुगेका बुद्धि चुनारा । वरिपरि चुनारा बस्ती नै रहेछ । यो समुदायको पुर्ख्यौली पेसा काठका ठेकी आदि सामान बनाएर बिक्री गर्ने रहेछ । आजकल पुर्ख्यौली पेसा संकटमा परेको छ, उनले सुनाए । यिनले अछाम, डोटी र डँडेल्धुरा पुगेर खेपेका भारीका दुःख मात्रै कहेनन् काला पहाड र देहरादुन पुग्दाका कहानी पनि सुनाए । पहिले यहाँ चुनाराहरूकै मात्र घर थिए रे । हामी पनि सोच्दै थियौं, कुनै बजारको मुख्य र मालदार ठाउँमा कसरी दलितहरूको बस्ती बसेको रहेछ ? खासमा मार्तडीका आदिवासी यिनै चुनाराहरू रहेछन् । २०३४ सालदेखियता सदरमुकाम बनेको मार्तडीका पुराना निवासीसँग गफिँदा हामीले मार्तडी नामबारे जिज्ञासा राख्यौं । तिनले एउटा कथा नै सुनाए ।
नजिकैको चौराँटा भन्ने ठाउँमा बस्ने एक जना किसान रहेछ । कामको चटारो धेरै । रात नसकिँदै झिसमिसेमै खेत जोत्न निस्केछ । अलिबेरमा त उसले नारेको हलगोरुमध्ये एउटाचाहिँ गाईको आवाजमा कराएछ । खासमा, अँध्यारोमै गोरु नार्दा उसले एउटा गोरुको सट्टा गाई पो नारेको रहेछ । काम छोड्ने बेला थिएन । त्यसैले जे त पर्ला भन्दै जोत्दै रहेछ । त्यही बेला कसैले दौडँदै आएर घरमा उसकी आमा अचानक मरेको खबर दिएछ । त्यो खबरले विचलित भएको उसले आफ्नो अपराधबोधको स्मरणमा त्यही खेतमा आमाको शव गाडिछोडेछ । मा अर्थात् आमालाई तोडेको (गाडेको) हुनाले त्यस वरिपरिको ठाउँ मा–तोडी हुँदै मार्तडी कहलिएछ !
यो कथा कति प्रामाणिक हो, त्यो भने पत्तो पाइएन ।
बजारको मुख्य बाटो भिरालो र साँघुरो छ । त्यसैमाथि निर्माणको काम हुँदै छ । ठाउँठाउँ खानेपानीका पाइप फुटेर निर्माणाधीन सडकभरि पानी बगिरहेको छ । कामको गति अत्यन्तै धीमा छ भन्ने थाहा पाउन धेरै बेर लाग्दैन । हामी कृषि ज्ञान केन्द्र हुँदै उँभो छड्किएर जिल्ला अस्पतालको क्वार्टरमा छिर्छौं । शनिबारको दिन, डाक्टर रोहित गिरी क्वार्टरमै भेटिन्छन् । जिल्ला अस्पतालको निर्माणाधीन भवन देखाउँदै उनी भन्छन्, यो बनेपछि केही सुविधा त होला ! तर मुख्य कुरा बिरामीको चापअनुसार स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी छैन । एउटा पोस्टमार्टम केस आउनेबित्तिकै ओपीडी सेवा ठप्प गर्नुपर्ने स्थिति छ ! त्यसमाथि नयाँ डाक्टरलाई विश्वास नगर्ने जनमानस !
यी डाक्टर पनि मिसिएपछि अब हाम्रो टोली छ जनाको भयो । दुई वर्षअघि नियुक्ति लिएर मार्तडी आएका रहेछन् यिनी । कोल्टीमा एअरपोर्ट र मार्तडीमा जिल्ला अस्पताल हुँदाका दुःख कहँदा कम्ता भावुक भएनन् । समयमा जहाज आइपुगेन भने काठमाडौं पठाउने बिरामीको त बिजोगै हुन्छ, उनले भने । विकट क्षेत्रमा काम गर्ने शिक्षक होउन् या डाक्टर, सामाजिक कार्यकर्ता होउन् या अरू कोही पनि ! सबैको अनुभूति उस्तै हुँदो हो ।
जिल्ला अस्पताल परिसरबाट सिधै उँभो लागेपछि स्थानीय शैलीका कच्ची घरै घर हुँदै बडिमालिका मन्दिरतिर सोझिने उकालो बाटो थालिन्छ । कतिपय घरमा ताल्चा झुन्डिएका छन् । तिनमा कोही बस्दैनन् । केही घरमा माथि गाउँतिरबाट ओर्लेका ज्याला मजदुर बस्छन् भाडामा । मार्तडीवासी बडिमालिकालाई खुबै श्रद्धा गर्छन् । जनश्रुतिअनुसार, मार्तडी ‘बडिमालिका माताको नाचनथली’ हो । त्यसैले बजारको टुप्पोमा मार्तडीको संरक्षकका रूपमा मन्दिरसमेत बनेको रहेछ । र, नगरपालिकाको नामसमेत बडिमालिका राखिएको छ । बडिमालिका मन्दिर भनिए पनि खास बडिमालिका मन्दिर यहाँबाट तीन दिनको दूरीमा पर्छ । योचाहिँ ‘मिनी’ बडिमालिका रे ! ठूलो अर्थात् वास्तविक बडिमालिका माताको मन्दिर त झन्डै ४२०० मिटरको उचाइमा रहेको छ । किंवदन्तीअनुसार बडिमालिका मातालाई चढाइएको ध्वजा हावामा उड्दै उड्दै आएर यहींनेर खसेकाले यहाँ मिनी बडिमालिका बनाइएको रे । बजारको सिरानमा रहेको यो मन्दिरको कौसीबाट मार्तडी बजारको छटा बहुत लोभलाग्दो देखिन्छ । स्कुल, क्याम्पस, नगरपालिका कार्यालयलगायत समग्र बजार अनि बजारमुनिको पूर्वी छेउमा बाहुली र अनै खोलाको सुन्दर संगमस्थल । खोलाको किनारमा यतिबेला गहुँ र आलुको रहरलाग्दो खेतीले शोभायमान बनेको फाँट छ र फाँट छेउमा छ लाम्चो, पातलो बस्ती ।
हामी मन्दिरनिरबाटै बजारतिर ओर्लियौं । ओर्लिंदा बाटैछेउ रहेको छाउगोठले हामीलाई अलिबेर अल्मल्याइदियो । छाउगोठबारे प्रसस्त सुने पनि प्रत्यक्ष देखिएको थिएन । जिज्ञासा भने धेरै थिए, त्यसको आकार, संरचना र छोइछिटोको तरिकाबारे । हामीले त्यसमा बसिरहेकी सुरजा बुढालाई पनि भेट्यौं । तिनीसँग केही कुरा गर्‍यौं । हिमाली गाउँपालिकाकी सुरजा बीएड पढ्न मार्तडी आएकी रहिछन् । डेरा गरेर बसेको भए पनि घरवालाले महिनावारी हुँदा त्यही गोठमा बस्नुपर्ने सर्त राखेका रहेछन् । पढे–लेखेर बुझ्ने भैसकेकी सुरजालाई छाउगोठमा बस्ने मात्रै होइन छाउका नाममा गरिने छोइछिटो नै गलत संस्कार हो भन्ने थाहा छ तर उनीसँग तत्कालको विकल्प छैन ।
त्यहाँबाट हामीलाई साथी खडकले स्थानीय अर्ग्यानिक खाजा पाइने होटलमा पुर्‍याए । साहुजी रहेछन् नृप सिंह, जैविक खाद्यवस्तुबाट मीठामीठा खानेकुरा बनाउन खप्पिस । कागुनाको खीर, मार्सेको लड्डू, फापरको केक र कोदोको पुवासहितको दिउँसोको खाजा अर्डर गरियो । यहाँ आइपुगेपछि यति त चाख्नैपर्‍यो ! घुमघामको बिहानको मेलो सकिएपछि बासस्थान फर्किइयो खाना खान । खानामा विशेष थियो स्थानीय रातो चामलको भात र सिस्नुको लेदो तरकारी । स्थानीय खानाको प्रवर्द्धनले सुदूरपश्चिमका उत्पादनहरूले कसरी राजधानी र देश–विदेशका विभिन्न ठाउँमा ख्याति पाएका छन् भन्ने चर्चा सुरु भयो । विकास, बजार र आधुनिकताको लहरमा हामीले पोषक खानेकुरामाथिको ज्ञान र अभ्यासलाई कसरी निरुत्साहित गर्दै आयौं भन्ने कुरा पनि भए । यी कुरा गरिरहँदा डाक्टर अरुणा उप्रेतीका लेखहरू खुबै सम्झियौं । उनीजस्ता केही पोषणविद्का प्रयत्नले पनि हो पछिल्लो समय स्थानीय उत्पादनमाथिको सम्मान र उपभोग बढ्न थालेको । यो आफैंमा सुखद थालनी हो ।
दिउँसो बजारको दक्षिण पश्चिमपट्टिको डाँडो उक्लिने तय भयो । उद्देश्य थियो पल्लोछेउबाट त्योभन्दा उताका गाउँ र मार्तडी बजारको दृश्य हेर्ने । अपी होटल अघिको चउरमा बसेर बजार निहार्दै देशको विकास सूचांकबारे गफिँदा आनन्द र अवसादले एकैसाथ छोप्यो । पछिल्लो समय संक्रामक रोगजसरी फैलिएको डोजर अर्थतन्त्रका आयामबारे ज्वालामुखी र विनोदका छलफल विचारोत्तेजक थिए । त्यसमा थपिलाग्ने खडक भैहाले । हामीले यी कुरा गरिरहँदा बाहुली खोलापारिको भित्ताका भीमकाय कीरोजस्तो एक्साभेटर दगुरिरहेको थियो । त्यसभन्दा पारि थियो पहिरोले खसालेको फुङ्ग उडेको नरमाइलो पाखो । माथिपट्टि डाँडाको पानीढलोमा सेनाको ब्यारेक छ । ब्यारेकको तारबारभन्दा ठीक अघिल्तिर एउटा खण्डहर घरसामु पुगेर अडिएका छौं हामी । यसभन्दा माथि नजाने मुडमा । किनभने त्यसमाथि जंगल र खर्क मात्रै छन् । त्यहाँबाट खोला वारि–पारिपट्टिका धेरैजसो गाउँ देखिन्छन् । सेना बस्ने दुर्ग ठीकै ठाउँमा रहेछ भन्ने लाग्यो । यहींबाट देखिन्छ मार्तडीको सकल बाहिरी अनुहार । भित्री अनुहार देख्न त अलिदिन आइजाइ गर्नैपर्छ । यत्तिकै कहाँ देखिन्छ ! यस पटकलाई बाहिरी रूप मात्रै हेरेर फर्किन सकिन्छ । त्यसैले धेरै भावुक हुन मन लागेन ।
भोलिपल्ट बडिमालिका नगरपालिकाका उपमेयर कविता विष्टलाई भेट्ने कार्यक्रम तय थियो । हाल सालै पेटको शल्यक्रियापछि आराम गरिरहेकी कविता हामीसँग मज्जाले गफिइन् । त्यहीँ भेटिइन् डँडेल्धुराकी गजलकार गौरी बुढाएर । मेसोमा उनका गजल पनि सुनियो । कष्टकर बाल्यजीवन र आजको यो प्रोफाइलसम्मको उनको बाटो कति संघर्षले बनेको छ, सुनाइन् कविताले । बालकैमा बाआमा गुमाएकी, घरीघरी आफ्नै कथामा द्रवित भइन् । आमजनताको चेतनास्तरसँग ठोक्किँदै काम गर्न कति चुनौती छन् सुनाइन् । यसैबीच विनोदले फ्याट्ट सोधिहाले, ‘उपमेयरका रूपमा अहिले तपाईंको सबैभन्दा ठूलो चुनौती के हो ?’
उनले बडो खेदपूर्वक जवाफ दिइन्, ‘न्यायिक समितिको संयोजकको भूमिका !’ उनलाई लाग्छ, यो भूमिका अवसरभन्दा बढी चुनौती हो । झन्डै उनान्सय प्रतिशत महिला उपप्रमुख रहेको स्थानीय सरकारमा न्यायिक समितिको संयोजक महिला नै बस्नुपर्ने जुन विधि बनेको छ, त्यसले हाल उपप्रमुख रहेका महिलालाई स्वतः अलोकप्रिय बनाइदिनेछ । ती कदाचित भोलिका चुनावमा प्रमुखको दाबेदार बन्न सक्ने स्थितिमा हुन्नन् । भए पनि हार्नेछन् । उनको कुराले हामी गम्भीर भयौं ।
उनीसँग एउटा विशेष सपना छ, आफ्नो कार्यकालसम्ममा नगरपालिकालाई छाउगोठमुक्त बनाउने । यो सपना पूरा गर्ने कार्ययोजना पनि छ उनीसँग । त्यसैअनुसार काम गर्दै पनि छिन् । तर यो सपना धेरै महँगो र चुनौतीले भरिएको छ । उनका योजना पूरा होऊन्, हामीले दिलैदेखि शुभकामना प्रकट गर्‍यौं । अब हिँड्ने तर्खर गर्नु थियो । मेरो मनको रंगशालामा तस्बिरमा मात्रै देखिएको खप्तड पाटनको विशाल भूमिको चित्र कुँदिरहेको थियो । मानौं मेरो एउटा गोडो त्यहीँ पुगिसकेको छ र अर्को एउटा मार्तडीमा । म भयंकर उत्साहित थिएँ । मार्तडी चिन्न विशेष सहयोग गर्ने साथी खडकले खप्तड जाने जिपको समेत व्यवस्था गरिदिएका थिए । उनीप्रतिको कृतज्ञताले मन भरिएको थियो तर भन्ने खास शब्द नपाएर म ट्वाँ परिरहेकी थिएँ । तै, केही त भनें । उदात्त हृदयको सदाशय र सहयोगमाथि कृतज्ञ हुनुपर्ने बेला मलाई जहिल्यै शब्दको संकट महसुस हुन्छ । यस पटक पनि यस्तै भयो । प्रकाशित : जेष्ठ १८, २०७६ ११:२५
यो कस्तो लडाइँ ?
हुवावेलाई लिएर चलिरहेको अमेरिका र चीनबीचको बजार युद्धले यतिखेर धेरैको ध्यान तानेको छ । दुई महाशक्तिबीच टकराव ल्याउने गरी आखिर भएको के हो ?
जेष्ठ १८, २०७६ विजय तिमल्सिना
आफ्नै देशको सामान प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने अमेरिका र खुला व्यापारको पक्षपाती चीन  । यो कस्तो विरोधाभास ? केही दशकयता आफूलाई खुला अर्थतन्त्रको अगुवा घोषणा गर्ने अमेरिका र बन्द शासनको रूपमा चित्रित गरिएको चीनको वर्तमान अवस्था जति रोचक छ, त्यति नै रहस्यमयी छ, यी दुई देशको व्यापार युद्धको अन्तरकथा  ।
एक वर्षयता चर्को रूप लिएको चीन–अमेरिका व्यापार युद्ध गत सातादेखि नयाँ मोडमा छ । भविष्यमा यो थप ‘हिंस्रक’ हुने अनुमान छ । बम, गोली वा बारुदको प्रयोगले यसलाई हिंस्रक भन्न खोजिएको होइन, दुई देशले आफ्नो प्रविधि कम्पनीहरू मार्फत खेल्न सक्ने प्रोक्सी वारको चर्को रूप स्मार्टफोनमा अभ्यस्त विश्व बजारका उपभोक्ताले सहनुपर्ने दिन आउन सक्छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकी प्रविधि प्रयोगबाट चिनियाँ कम्पनीलाई बन्देज लाउने गरी जारी गरेको नयाँ निर्देशिकाका कारण गुगलले चिनियाँ कम्पनी हुवावेलाई आफ्नो प्रभावशाली उत्पादन एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टम प्रयोगबाट वञ्चित गराउने निर्णय गरेको छ । अमेरिकी निकायको निर्णयलाई मान्ने हो भने अबको तीन महिनापछि हुवावेको फोनमा एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टमका अपडेट प्राप्त हुने छैनन् । हरेक स्मार्टफोन निर्माताले निःशुल्क रूपमा एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टमलाई आफ्नो मोबाइलमा प्रयोग गरेबापत राख्नुपर्ने गुगलका एपको प्रयोगबाट पनि हुवावेका उपभोक्ता वञ्चित हुनेछन् ।
विश्व मोबाइल बजारको करिब ८० प्रतिशत हिस्सा एन्ड्रोइड प्रयोगकर्ताले ओगटेको र तीमध्ये पनि करिब २० प्रतिशत हुवावेको उपभोक्ता भएकाले यसले उसको बजारमा धक्का पुग्छ भन्नेमा कुनै शंका नहोला ।हुवावेले पनि चाँडै नै आफ्नै सफ्टवेयर इकोसिस्टम निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ । उसको भनाइको तात्पर्य के हो भने गुगलको अपरेटिङ सिस्टम प्रयोग गर्न नपाए पनि उपभोक्तालाई उसले त्यत्तिकै उत्कृष्ट अनुभूति दिलाउनेछ । तर, जिमेल नि ? अनि गुगल म्याप ? गुगल सर्च ? एन्ड्रोइड स्मार्टफोन उपभोक्ताका यी प्रिय एपहरूबिना हुवावेले कसरी उपभोक्तालाई आफ्नो उत्पादनप्रति विश्वस्त बनाउन सक्ला ? सायद यही प्रश्न अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई पनि लागेको थियो र उनले हुवावेलाई अमेरिकी प्रविधि प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयमा हस्ताक्षर गरे, एक्कासि । ट्रम्पलाई किन हुवावेप्रति किन यति धेरै रिस ?
पछिल्ला वर्ष अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको अभिव्यक्तिलाई पछ्याउनेहरूले चीन र चिनियाँ कम्पनीप्रति उनको रिस अनुभव गरिसके र त्यसको थोरबहुत कारण पनि उनीहरूले पत्तो पाइसके । चीन र अमेरिकाबीचको व्यापारमा चासो राख्नेहरूलाई थाहै छ, अमेरिकालाई चीनसँगको व्यापारमा कति घाटा छ । सोझो अर्थमा भन्ने हो भने अमेरिकाले चीनबाट जति सामान आयात गर्छ, त्यसको एक तिहाइ मात्रै चीन पठाउँछ । सन् २०१८ भर अमेरिकाले चीनमा १ खर्ब २० अर्ब डलरको निर्यात गर्दा करिब ५ खर्ब ४० अर्ब डलरको आयात गरेको थियो । गत वर्ष उसको व्यापार घाटा मात्रै करिब ४ खर्ब २० अर्ब डलर छ ।
ट्रम्पको बुझाइ छ, चीनले अमेरिकी कम्पनीमाथि गरेको अनुदार व्यवहारका कारण अमेरिकाले चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको हो र अघिल्ला राष्ट्रपति बाराक ओबामाले यसको समाधानका लागि कुनै कदम चालेनन् । ट्रम्पका समर्थकहरू उनको यो अभिव्यक्तिका कारण निकै गर्व गर्छन् र राष्ट्रवादी मान्छन् । यही लोकप्रियताको उपज होला, अमेरिकाले गत वर्षदेखि चिनियाँ सामानमा भन्सार महसुल वृद्धि गर्न थालेको र त्यसैको प्रत्युत्तरमा चीनले अमेरिकी सामानमा पनि त्यसैगरी भन्सार महसुल वृद्धि गरेको । चीनले अमेरिकामा धेरै परिमाण र बढी मूल्यका सामान निर्यात गरेको देखिए पनि उसको कुल निर्यातको यो २० प्रतिशत मात्रै हो । अर्थात्, चीनले आफ्नो देशमा उत्पादन गरेर निर्यात गर्ने ८० प्रतिशत सामान अरू देशहरूमा पठाउँछ ।
बरु, धेरै ठूला अमेरिकी ब्रान्डको सबैभन्दा ठूलो बजार नै चीन हो । गुगल र फेसबुकजस्ता ठूला अमेरिकी कम्पनीले चीनमा बजार नपाए पनि जहाज, गाडी र आइफोनजस्ता ठूला कम्पनीहरू आफ्नो नाफाका लागि चिनियाँ बजारसँग बढी नै निर्भर छन् । यी कम्पनीहरूले खुलेर बोल्न नसके पनि अमेरिकाले चीनसँग धेरै द्वन्द्व नबढाए हुन्थ्यो भन्ने चाहेका होलान, सायद ।भन्सार महसुल बढाउने र चिनियाँ सामानलाई आफ्नो देशमा महँगो बनाउने । अनि, आफ्नै देशमा उत्पादित सामान तुलनात्मक रूपमा सस्तो देखिन्छ र स्वदेशमा बढी खपत हुन्छ । यो रणनीतिले मात्रै ट्रम्पलाई पुगेन अनि धेरै वर्षदेखि चलिआएको आरोप–प्रत्यारोपको अर्को शृंखला सुरु भयो ।
‘चीनले गुप्तचरी गर्‍यो । चिनियाँ कम्पनीले आफ्नो देशको सरकारलाई तथ्यांक चोरीमा सघाए ।’ अमेरिकी सरकारबाट सन् २०१५ यता चीन र चिनियाँ कम्पनीले सबैभन्दा बढी खेपेको आरोप हो यो । यो आरोपबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित अरू कोही नभएर चिनियाँ कम्पनी जेटीई र हुवावे नै थिए । अलि अघिसम्म चिनियाँ कम्पनी जेटीई दूरसञ्चार उपकरणका लागि विश्वभर नै प्रख्यात थियो । तर हुवावेले आफ्नै देशमा भएको कम्पनीलाई गजबले पछि पार्‍यो । जेटीईको त कुरै छाडौं अहिले विश्वमा सायदै कुनै कम्पनी होलान् जसले हुवावेसँग प्रतिस्पर्धा गरून् । नयाँ प्रविधिको अनुसन्धान, स्मार्टफोन, दूरसञ्चार उपकरण, दूरसञ्चार कम्पनीले प्रयोग गर्ने सफ्टवेयर, नेटवर्क सामान, धेरै कर्मचारी भएका कार्यालयले प्रयोग गर्ने सफ्टवेयर । हुवावेले हात नहालेको कुनै क्षेत्र छैन् र उसले सफलता नपाएको कुनै क्षेत्र पनि छैन ।
आफ्नै अनुसन्धान, आफ्नै प्याटेन्ट राइट, आफ्नै उत्पादन, आफ्नै प्रभाव । सफ्टवेयर र हार्डवेयरमा हुवावेको यो चक्रीय शैली यसरी नै जाने हो भने दूरसञ्चार क्षेत्रमा सायदै कुनै कम्पनीले टाउको उठाउने ठाउँ पाउलान् । कुनै कम्पनीले धेरै सफलता हासिल गर्दा उसलाई रोक्ने कुनै उपाय बाँकी रहन्न् ? हुवावेका लागि आफ्नै सफलता घातक भयो ? यो अनुमान मात्रै हो ।कि हुवावेले अमेरिकाले भनेजस्तै अरूको तथ्यांक चोरेर आफ्नो सरकारलाई बुझायो ? यो पनि अरोप मात्रै हो किनकि अमेरिकाले अहिलेसम्म हुवावेले तथ्यांक चोरेको र आफ्नो सरकारलाई दिएको पुष्टि गर्न सकेको छैन् । धेरै अमेरिकी अधिकारीहरूले हुवावेले अरू देशको दूरसञ्चार पूर्वाधार निर्माण गर्ने र त्यसै मार्फत तथ्यांक चोरी गरी आफ्नो देशमा लैजाने गरेको आरोप लगाउन थालेको पनि करिब चार वर्ष भइसक्यो । तर, खै त प्रमाण ? हुवावेका अधिकारी र कम्पनीले जारी गर्ने विज्ञप्तिमा पनि प्रायः यही आशयको प्रश्न सोधिन्छ । प्रमाण पनि सार्वजनिक गरेको भए सायदै अमेरिकामाथि कसैले प्रश्न गर्ने थियो न त हुवावेले यसरी प्रत्युत्तर फर्काउने मौका पाउने थियो ।
हुवावेमाथि अमेरिकी सरकार खनिनुको सबैभन्दा ठूलो कारण फाइभजी प्रविधि हो । यसलाई धेरैले तर्कसंगत मानेका छन् । यसको आधार पनि छ । फोरजी अर्थात् मोबाइल नेटवर्क प्रविधिको चौथो पुस्ता विश्वका प्रमुख सहरमा उपलब्ध भइसक्दा नसक्दै खोजी गर्न थालिएको प्रविधि हो फाइभजी । सामान्य मानिसलाई यसको आवश्यकता पर्ला नपर्ला तर विश्वमा जुन भविष्यको परिकल्पना गरिएको छ, त्यसका लागि फाइभजी अत्यावश्यक छ । फाइभजीको कुरा गर्दा इन्टरनेट अफ थिङ्सको अवधारणा छुटाउन मिल्दैन । इन्टरनेटको सहायताले एक मेसिनले अर्को मेसिनसँग अन्तर्क्रिया गर्ने र तोकिएको काम गर्ने प्रणाली नै यसको अवधारणा हो । यसको अर्थ हो भविष्यमा हाम्रो राइसकुकर एपको निर्देशनमा चल्छ, घरको रेफ्रिजेरेटर अफिसमा बसेर अफ गर्न सकियोस्, घर अगाडि पुग्दा गाडीबाटै बटन थिचेर ढोका खोल्न सकियो ।
यो अवधारणामा मानिसले धेरैभन्दा धेरै मेसिनसँग इन्टरनेटको माध्यमबाट अन्तर्क्रिया गर्छ र मेसिन पनि अर्को मेसिनसँग जोडिन्छन् । यो अवधारणालाई मूर्तरूप दिने उपलब्धि मानिन्छ फाइभजीलाई, जसमा लेटेन्सी शून्य हुन्छ । अर्थात्, कुनै काम गर्नका लागि दिइने कमान्ड र उक्त काम भइसक्ने अवधि करिब करिब शून्य हुन्छ । अझैं सजिलोसँग भन्दा चालकविहीन कार एकनासले गुडिरहेको छ र अगाडि एक्कासि कोही मान्छे आइपुगे, रिमोट नियन्क्रणमा लिएको व्यत्तिले तत्कालै ब्रेक हान्नका लागि कमान्ड गरून् र हान्नासाथ मिलिसेकेन्ड पनि ढिला नगरी त्यो गाडी रोकियोस् ।
एउटा वेबसाइट खोल्न त केही मिलिसेकेन्ड लाग्ने अहिलेको अवस्थामा कुनै कामका लागि निर्देशन दिनेबित्तिकै एक मिलिसेकेन्डको पनि समय नखाई काम फत्ते हुन्छ भने त्यो कति द्रुत होला ? हो यस्तै द्रुत गतिको मोबाइल नेटवर्क प्रविधिको विकासमा हुवावे अहिले सबैभन्दा अगाडि छ । कति अगाडि ? यसलाई प्रतिशतमा मापन गर्ने आधार त छैन तर भन्न सकिन्छ, उसका प्रतिस्पर्धी कम्पनीले अनुसन्धानबाट कुनै उपलब्धि हात नपार्दा हुवावेले भने फाइभजी नेटवर्क विस्तारको लागि ठेक्का सम्झौता गर्न थालिसकेको छ । फाइभजी नेटवर्क सपोर्ट गर्ने स्मार्टफोन सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
फाइभजी प्रविधिमा हुवावेले हात पारेको यो सफलतालाई ईर्ष्या नगर्ने कम्पनी सायदै छन्  । ईर्ष्या नहोस् पनि किन विश्वका धेरै देश र त्यहाँका उपभोक्ता फाइभजी कस्तो होला भनेर अनुभव गर्न आतुर छन्, धेरै दूरसञ्चार सेवाप्रदायक सबैभन्दा पहिला आफ्ना उपभोक्तालाई यो प्रविधिबाट सेवा दिन आतुर छन् । हुवावेको दाबीलाई मान्ने हो भने फाइभजी नेटवर्क जडान गर्न ऊ तयार छ तर कतिपय कम्पनीले भने नेटवर्क त परै जाओस् यसलाई सपोर्ट गर्ने स्मार्टफोन पनि थोरैले मात्र बनाउन सकेका छन् ।हुवावेले पछिल्लो पटक प्रकाशित गरेको आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार ३० सहरमा फाइभजी विस्तारका लागि उसले ठेक्का पाएको छ ।
फाइभजी प्रविधिमा हुवावेको यो अग्रसरता अमेरिकालाई मात्रै होइन्, क्यानडा र अरू युरोपियन देशका लागि पनि टाउको दुखाइको विषय भएको छ । सबैभन्दा पहिलो हुवावेको फाइभजी विस्तारमा प्रश्न उठाउने देश अमेरिका नभएर अस्ट्रेलिया हो । अस्ट्रेलियाले गत वर्ष सार्वजनिक रूपमै फाइभजी प्रविधिमा हुवावेको सफलता र यसले निम्त्याउने संकटको विषयमा प्रश्न गरेको थियो । आफैं प्रविधि उद्यमी रहेका अस्ट्रेलियाली पूर्वप्रधानमन्त्री माल्कम टर्नबल गत वर्ष फेब्रुअरीमा अमेरिका भ्रमणमा जाँदा राष्ट्रपति ट्रम्पसँग यही विषयमा कुराकानी भएको धेरै सञ्चारमाध्यमले समाचार बनाएका थिए । प्रधानमन्त्रीसहित दूरसञ्चार र सूचना प्रविधिसम्बन्धी व्यवसायी पनि भएकाले उनमा यो विषयप्रति बढी नै चासो थियो ।
तर, अस्ट्रेलियाले उठाएको प्रश्न र अमेरिकाले गरेको निर्णयमा केही भिन्नता भने छ । अस्ट्रेलियाले फाइभजी अहिलेजस्तो उपभोक्ताको मोबाइलमा मात्रै नभई धेरै मेसिनसँग जोडिने खालको प्रविधि भएको र बुझ्दै नबुझी यसको प्रयोगको सुरुआत गर्दा तथ्यांक चोरी वा भनौं साइबर हमलाको जोखिम बढ्न सक्ने प्रश्न गरेको थियो ।अस्ट्रेलिया फाइभ आइज भनिने समूहको सदस्य राष्ट्र पनि हो । बेलायत, क्यानडा, न्युजिल्यान्ड र अमेरिका यसका सदस्य छन् । यो समूहले आफूले प्राप्त गोप्य सूचना एक अर्कासँग सेयर गर्छन् । फाइभजी असुरक्षित भए यसले भविष्यमा ठूलो साइबर जोखिम, प्रयोगकर्ताको गोपनीयताको संकट निम्त्याउने अस्ट्रेलियाको विश्लेषणमा सबै देश सहमत छन् सबैले अघोषित रूपमा आफ्ना देशमा सञ्चालित दूरसञ्चार कम्पनीलाई फाइभजी प्रविधिको लागि हुवावेको सामान प्रयोग गर्न बन्देज लगाएका छन् । यसको प्रभाव छिमेकी भारतसम्म पनि छ ।
यिनले हुवावेले विकास गरेको फाइभजी प्रविधिलाई विश्वास नगरेका हुन् वा यसबाट उसले प्राप्त गर्ने लाभसँग डराएका हुन् ? यो प्रकरणमा उठेको अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो । फोजी प्रविधिको नेतृत्व गर्दा अमेरिकाको अर्थतन्त्रमा यसले ४ सय अर्ब डलरभन्दा बढीको योगदान गरेको थियो । ओभुम फरकास्टरले गरेको एक अध्ययनअनुसार फोजी प्रविधिमा अगाडि रहँदा अमेरिकाको अर्थतन्त्रलाई यसले ४ सय ४५ अर्ब डलरको योगदान गरेको थियो ।सन् २०११ मा वायरलेस क्षेत्रले अमेरिकाको जीडीपीमा करिब २ सय अर्ब डलरको योगदान दिन्थे, सन् २०१४ मा फोजी प्रविधिको विस्तारसँगै यसको योगदान बढेर साढे तीन सय अर्ब डलर पुग्यो । फाइभजीमा पनि यसैगरी जसले नेतृत्व लियो, उसैले सुरुआती फाइदा पाउने पक्का छ । फाइभजी प्रविधि जसले पहिलो अनुसन्धान गर्‍यो, जसले कार्यान्वयन गर्‍यो, उसको प्याटेन्ट अधिकार, सामान बिक्रीबापत प्राप्त हुने लाभ त छँदै छ, त्यो जस्तै जोडिने अप्रत्यक्ष लाभ सम्बन्धित देशले पाउँछ । सायद, नयाँ प्रविधिले दिने आर्थिक लाभ अरू देशमा जाने भएकाले पनि विश्वका दुई महाशक्ति भिडिरहेका हुन् कि ? क्यानडाले भने हुवावेको फाइभजी प्रविधि अनिश्चित भएर युरोपियन कम्पनी नोकियालाई फाइभजी प्रविधिमा अनुसन्धान गर्न अनुदान रकम दिने घोषणा गरेको छ ।
चिनियाँ कम्पनीले अरू देशको तथ्यांक चोरी गर्छन् र आफ्नो सरकारलाई सहयोग गर्छन् भन्ने आरोप एक्कासि सुरु भएको भने होइन । यसको चर्चा गर्दा पनि सन् २०१५ लाई आधार बनाउन सकिन्छ । चिनियाँ सरकारले सन् २०१५ मा सार्वजनिक गरेको १० वर्षे विकास अवधारणा– मेड इन चाइना २०२५ लाई लिएर धेरै आलोचना भएको थियो । केही युरोपेली देशले चीनबाट प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको रूपमा आउने रकम र प्रविधिलाई निरुत्साहित गर्ने घोषित रणनीति नै बनाए । जर्मनी, फ्रान्स र बेलायत घोषित रूपमै यसविरुद्ध आए । चीन सरकारले सार्वजनिक गरेको उक्त १० वर्षे रणनीतिमा २०२५ सम्ममा चीनलाई उत्पादनको पावरहाउस बनाउने उल्लेख छ । त्यसका लागि १० वटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र छनोट गरिएको छ । यिनमा विद्युतीय कारदेखि रोबोट, जहाज, विद्युतीय सामग्री र मेडिकल क्षेत्रमा प्रयोग हुने उपकरण छन् ।दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने कपडा, जुत्ताजस्ता सामान सस्तोमा उत्पादन गरी बिक्री गर्ने भनिएको चीनले आफूलाई उच्च प्रविधियुक्त सामान उत्पादनमा अगाडि आउन खोज्नुलाई उसले मिडल इनकम ट्र्यापबाट माथि उठ्ने रणनीति मानेको थियो । यस्तै खालको रणनीति हङकङ, सिंगापुर, दक्षिण कोरियाजस्ता देशले पनि लिएका छन् । उच्च मूल्य र जटिल प्राविधिक दक्षता दिने यस्ता उत्पादनको चिनियाँ लक्ष्यप्रति धेरै पश्चिमा देशले चासो दिएका थिए । उनीहरूले यसलाई पश्चिमा प्रविधि प्रयोग नगर्ने चिनियाँ रणनीति भनी बुझेका छन् ।
आफ्ना देशमा स्थापना भएका निजी कम्पनीले उत्पादन र विकास गर्ने प्रविधिमा निर्भर अमेरिकासहित पश्चिमा देशको बुझाई चिनियाँ कम्पनीले आफ्नो सरकारको आड पाएर आफ्ना देशका उत्पादनलाई पछि पार्ने थियो । यस्तै खालको चासो पश्चिमा देशमा रहेका ठूला कम्पनीलाई नभएका होइनन् । यो १० वर्षे रणनीतिको सुरुआती वर्षमै रेल, रोबोट र साना विद्युतीय सामग्री उत्पादनमा चीनले निपुणता देखाइसकेको छ । भोलि अमेरिका र युरोपमा उत्पादित हवाइजहाज पनि चीनले किन्न छाड्यो भने ?
ट्रम्पले चिनियाँ सामानमा भन्सार महसुल वृद्धि गराउनुको एउटा कारणमा चीनले अमेरिकी कम्पनीको बौद्धिक सम्पत्ति चोरी गरेको आरोप लगाएका छन् । बौद्धिक सम्पत्ति चोरीको कारण मेड इन चाइना २०२५ नीति उनको तर्क छ । यो नीतिले केही निश्चित क्षेत्रमा चिनियाँ कम्पनीलाई संरक्षण गर्ने उल्लेख गरिएको छ र केही क्षेत्रमा काम गर्ने विदेशी कम्पनीले चिनियाँ कम्पनीलाई साझेदार बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
यो व्यवस्थाका कारण विदेशी कम्पनीसँग रहेको सीप चिनियाँ कम्पनीमा हस्तान्तरण हुने र स्वदेशी कम्पनीलाई संरक्षण गर्ने व्यवस्थाका कारण विदेशी कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धामा समान व्यवहार नगरिने भन्दै अमेरिका र युरोपियन युनियनबाट चीन पुगेका धेरै कम्पनीले यसअघि नै चासो देखाइसकेका छन् । आफ्नो देशबाट चीनमा लगानी गरेका उद्योगलाई समान व्यवहार नगरेको भन्दै बाराक ओबामाकै पालादेखि चीनको यो नीतिविरुद्ध ईयू र अमेरिका एकजुट भएका थिए ।
ट्रम्पले पनि मेड इन चाइना नीतिअन्तर्गत विशेष सहुलियत पाएर उत्पादन भएका सामानलाई छानीछानी भन्सार वृद्धि गर्ने घोषणा गरेका थिए । जसमध्ये रोबोट, स्याटेलाइट, सेमिकन्डक्टरजस्ता सामान व्यापार द्वन्द्वको सुरुआतरदेखि नै भन्सार महसुल वृद्धि गरिने सूचीमा परेका थिए ।
प्रकाशित : जेष्ठ १८, २०७६ १२:११